November 2020 – " कञ्चनजंगा News "
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, मंसिर १६ गते मंगलबार, भोली तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, मंसिर १६ गते मंगलबार, भोली तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
तपाईंको लागि दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। खर्चमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। सबै पैसा सम्बन्धित र लेनदेन सम्बन्धित काममा सावधान हुनु आवश्यक छ। अनावश्यक वाद-विवाद नहोस्।, ध्यान दिनुहोला। परिवारका सदस्यसँग मनमुटाव हुनसक्छ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ।
वृष –इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)
(मानसिक रूपमा तपाईंले वैचारिक स्थिरता महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो आर्थिक उत्तरदायित्व राम्ररी पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आर्थिक योजना बनाउन सफल हुनुहुनेछ। गहना, प्रसाधन सामग्री र मनोरन्जनका लागि खर्च हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईं रमाइलो समयको आनन्द लिनुहुनेछ।
परिवार र बच्चाहरूसँग मतभेद हुनसक्छ। क्रोध तथा बोलीमा संयम राख्नुहोस्। शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, विशेषगरी आँखा सम्बन्धि समस्या देखा पर्न सक्छ। दुर्घटना वा आकस्मिक खर्च हुनसक्छ। भाषा र व्यवहारमा नरमता कायम राख्नुहोस्। कार्यक्षेत्रम समय अनुकूल रहनेछ।
तपाईंको आय वृद्धि हुनेछ आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। साथीहरुसँग रमणीय भेटघाट हुनेछ। स्त्री मित्रबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। विवाह योग छ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। हरेक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा उच्च पददहिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। बुबाबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। सरकारी काममा फाइदा हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। गृहस्थजीवन सुमधुरतापूर्ण रहनेछ।
यात्राको सम्भावना छ। स्त्री मित्रबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। धार्मिक कार्य र धार्मिक यात्रामा व्यस्त भइएला। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। दाजु-भाईबाट लाभ मिल्नेछ। आर्थिक हिसाबले दिन शुभ रहनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ राह्नेछ। भाषा र व्यवहारमा संयम राख्नुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि समय राम्रो छ। सम्भवतः पानी र महिलाबाट टाढा रहनुहोस्। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ।
मित्रगणसँग रमणीय यात्राको सम्भावना रहेको छ। स्वस्दिष्ट एवम उत्तम भोजन तथा नयाँ वस्त्र पाएर तपाईं प्रशन्न हुनुहुनेछ। सामजिक क्षेत्रमा सम्मान बढ्नेछ र सम्मानित हुने सम्भावना छ। वाहन सुख प्राप्त होला। वैवाहिक जीवन सुखमय रहनेछ। प्रियजनसँग भेटघाट गर्ने मौका मिल्नेछ।
आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। घरमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा अलाभ मिल्नुका साथै सहकर्मीबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। माइती पक्षबाट शुभ खबर मिल्नेछ। वाणीमा असमयम राख्नुहोला। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्।
नयाँ कार्य सुरु गर्न वा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न यस दिन शुभ छैन। सन्तानको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछैनन्। अनावश्यक खर्च हुनेछ। सन्तानसँग मदभेद हुनसक्छ। व्य्तापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि समय अनुकूल नरहला।
मानसिक चिन्ताको अनुभव गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। महिलाको गहना, कपडा, सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा खर्च हुनेछ। आमाबाट लाभ हुनसक्छ। जग्गा, घर र सवारी साधनहरूको कारोबारमा ध्यान दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन शुभ रहनेछ।
तपाईको रचनात्मक र कलात्मक शक्तिहरु बढ्नेछन्। वैचारिक स्थिरताका कारण, तपाईं आफ्नो काम राम्ररी समाप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि दिन शुभ छ। जीवनसाथीसँग आनन्दमय समय बित्नेछ। मान-सम्मान मिल्नेछ।
चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी : कोरोना भाइरस भारतबाटै विश्वभर फैलियो
No Comments on चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी : कोरोना भाइरस भारतबाटै विश्वभर फैलियो
चिनियाँ वैज्ञानिकको समूहले पहिलोपटक भारतबाट कोरोना भाइरस फैलिएको दाबी गरेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम नव भारत टाइम्सका अनुसार चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सका वैज्ञानिकहरूको समूहले कोरोना भाइरस भारतमा गर्मी मौसममा २०१९ मा फैलिएको थियो।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार कोरोना भाइरस जनावर र फोहोर पानीबाट मानिसमा पुगेको थियो। त्यसपछि भारत हुँदै चीनको वुहान पुग्यो र त्यहाँ कोरोना भाइरसको पहिचान भएको थियो।
चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले भनेक छन्,’खराब स्वास्थ्य प्रणाली र युवाहरूको कारण कोरोना भाइरस सम्पर्क नआएका मानिसमा यो रोग सरेको थियो।’
अहिले दोस्रो मुलुकका वैज्ञानिकले चिनियाँ वैज्ञानिकले गरेका दाबी गलत भएको बताएका छन्। बेलायतको ग्लास्गो विश्वविद्यालयका विशेषज्ञ डेबिड रोबर्टसनले भनेका छन्,’ चिनियाँ वैज्ञानिकले गरेका अनुसन्धान गलत छन्। यसले कोरोना भाइरसको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिएको छैन।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ। यसको लागि संगठनले परीक्षण,खोज तथा अनुसन्धानको लागि आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाएको छ।
कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण गत वर्षको डिसेम्बरमा वुहान प्रान्तमा फेला परेको थियो।
No Comments on प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खोले टिकटकमा खाता, पहिलो भिडियो एक लाखले हेरे
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय हुन मन पराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि टिकटक अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफै सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरुको निकै गहिरो अध्ययन गर्छन ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा चासो र रुची राख्छन् । यद्धपी उनको फेसवुक र ट्वीटर भने सचिवालयले चलाउने गरेको छ ।
ट्वीटर र फेसवुकमा सकृय प्रधानमन्त्री ओलीले टिकटक एकाण्ट पनि खुलेको हो । ओलीको सचिवालयका अनुसार @kpsharmaoli_official ह्याण्डल सञ्चालनमा आएको हो।
प्रधानमन्त्री पहिलादेखि नै फेसबुक र ट्विटरमा भएपनि युवा पुस्तामाझ रहेको टिकटकमा पनि उनका गतिविधि राख्न टिकटक प्रयोग गरिएको सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भिडियो टिकटकमा अपलोड पनि भइसकेको छ । उनको पहिलो भिडियो अहिले सम्म एक लाख जनाले हेरिसकेका छन् ।
टिकटकले प्रधानमन्त्रीको अकाउन्ट भेरिफाइ गरिसकेको छ। नयाँ पुस्तामाझ टिकटक चर्चित छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले छलफल गरेर नै सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
ऋषी कपूूरको निधनपछि एक्ली भएकी नीतू कपूरलाई छोरा रणवीरले पनि छाडे
No Comments on ऋषी कपूूरको निधनपछि एक्ली भएकी नीतू कपूरलाई छोरा रणवीरले पनि छाडे
एजेन्सी । ऋषी कपूूरको निधनपछि नीतू कपूर एक्ली भएकी छिन् । उनले आफ्नो दिवंगत श्रीमान ऋषी कपूूरलाई सम्झिरहेको कुरा सोशल मिडिया मार्फत जताउँदै आईरहेकी हुन्छिन् । पछिल्लो समयमा नीतूले ऋषी कपूूरलाई भर्खरै सकिएको दशै र तिहारमा निकै नै मिस गरेको कुरा सोशल मिडियामा तस्वीर शेयर गरेर जताएकी थिईन् । उनले ऋषी कपूूर सहित पुरै परिवार भएको तस्वीरलाई शेयर गरेकी थिईन् ।
श्रीमानको निधन पश्चात आफुलाई एक्लो महसुस गरेकी नीतूले छोरा रणवीर कपूरको पनि साथ पाएकी छ्रैनन् । रणवीर नीतू र ऋषीको एक्ला छोरा हुन् । रणवीर एक्लो छोरा हुँदाहँदै पनि उनी आफ्नी आमासंग संगै नबसेर अलग्गै बस्दै आएका छन् ।
रणवीर त्याहाँ बसिरहेका छन् जहाँ आलिया भट बसेकी छन् । आमा नीतूलाई एक्लै छाडेर रणवीर आफ्नै प्रेमिका आलिया भटसंग एउटै अपार्टमेन्टमा बस्दै आईरहेका छन् । आलियाले भर्खरै मात्र ३२ करोडमा एउटा फ्ल्याट किनेकी छिन् । उक्त फ्ल्याट मुम्बईको बस्तु पाली हिल कम्प्लेक्समा रहेको छ । त्यसै कम्प्लेक्समा रणवीर कपूर पनि बस्दै आएका छन् ।
खबरका अनुसार आलिया उक्त अपार्टमेन्टको पाचौँ तलामा बस्छििन् भने रणवीर कपूर पनि त्यसै अपार्टमेन्टको सातौँ तलामा बसेका छन् । रणवीरको यो व्यवहारदेखि आमा नीतू र उनकी दिदी पनि निकै नै निरास छन् । उसो त रणवीर आफ्नो बुवा ऋषी कपूूरको निधन भएपछि बुवाको किर्याकर्म गर्ने समयमा आफ्नो घरमा नबसेर आलियासंगै बसेको कुरामा पनि निकै नै विबादमा तानिएका थिए ।
No Comments on माया अन्धो हुन्छ भन्ने भनाई मलाइका र अर्जुनमा भएको छ लागू, यसरी गर्दैछन् हिमाचल प्रदेशमा रोमान्स
एजेन्सी । मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुरको अफेयरको बारेमा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । विगत केही वर्षदेखि बलिउडका यो जोडी अरु जोडीको तुलनामा सबैभन्दा चर्चित जोडीको रुपमा चिनिंदै आएको छ । अर्जुनको मायामा अन्धो भएकी मलाइकाले अर्जुनलाई पाउनकोलागी आफ्नो श्रीमान अरबाज र उनका परिवारलाई त्यागेकी थिईन् । मलाइका र अर्जुनको उमेर निकै नै फरक छ ।
मलाइका र अर्जुनको प्रेम सम्बन्ध जब बाहीरियो तब पुरै बलिउडमा नै भूईँचालो आएको थियो । शुरुका दिनहरुमा यो जोडी ट्रोल भएतापनि हिजोआज भने यो जोडीलाई उनका फ्यानहरुले रुचाएका छन् । मलाइका र अर्जुन प्रायजसोसँगै देखिन्छन् । पछिल्लो समय उनीहरु आफ्नो रमाईलो समय हिमाचल प्रदेशमा बिताइरहेका छन् । जहाँ अर्जुन कपुर आउने फिल्म ‘भुत पुलिस’को शुर्टिङको लागि पुगेका थिए । उनीसँगै मलाइका पनि गएकी थिइन् ।भर्खरै मात्र मलाइकाले अर्जुन कपुरसँगै भएको एक तस्वीर सेयर गरेकी छिन् । यस तस्वीरमा अर्जुनको हात समातेकी छिन् । अर्जुनले कालो ट्राउजर र लाइट ग्रे कलरको तातो टिशर्ट लगाएका छन् भने मलाइकाले आलिव कलरको कपडा लगाएकी छिन् । दुवैको जोडी निकै मायालु देखिएको छ ।
यो तस्वीर सेयर गर्दै मलाइकाले एउटा स्टेटस् पनि लेखेकी छिन् । आफ्नो प्रेमी अर्जुनकोलागी उनले लेखेकि छन्, ‘जब तिम्रो आसपासमा रहन्छु तब कुनै पल फिका लाग्दैन ।’ उनको तस्वीरलाई खुलेर फ्यानहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । फोटोमा अर्जुनले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिदै लेखेका छन्, ‘मलाई थाहा छ ।’
No Comments on नेकपा फुटकै मुखमा पुगेका बेला विप्लवले प्रचण्ड पठाए यस्तो सन्देश
काठमाडौं – बि’द्रोही दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लवले जनयु’द्ध लडेका सबै सक्ति एक भएर अगािड बढ्नुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्ड र बाबुराम अहलेको यात्राबाट फर्किए सँगैजान सकिने बताए हुन् ।
पार्टीको सातौ पुनगठन दिवसको अबसरमा रातोखबरलाई दिएको अन्तर्वार्ता विप्लवके सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भराईसँगै अगाडी बढ्न आफू तयार भएको बताए । विप्लवले प्रचण्ड र बाबुरामलाई अध्यारो सुरुङ्ग भएको भन्दै फर्किन आग्रह गरे।
उनले प्रचण्ड र बाबुरामले समातेको राजनीतिक राजनीतिक बाटो बाट केहि नहुने भन्दै क्रान्तिमा फर्किन आग्रह गरेका हुन्। म त भन्छु सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ प्रचण्डले पनि एक ठाउँमा भन्नु भएछ सबै माओबादी एक ठाउँमा हुनु पर्छ भनेर मेरो पनि भनाई त्यहि हो कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ फर्किनुस।
सहंदरबार वा अलिसान महलमा पुग्दा पनि प्रचण्ड बाबुरामलाई विगतको गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण होला भन्ने आफूलाई लागेको बताए । उनले जनमुक्ति सेनाको लाइनबाट, जनताको घरमा गुन्द्रीमा सुतेर देखेको गौरवपूर्ण सपनाको अहिलेपनि स्मरण हुन्छ होला भन्ने लागेको धारणा ब्यक्त गरे।
अर्को एक प्रसंगमा बिप्लवले आफूले उठाएका कुरा सरकारले सुनेको अवस्थामा बार्ता हुने संकेत पनि गरेका छन् । आफु हरु वार्ताको लागि तयार रहेको तर सिके राउत बनाउन सम्भव नभएको जिकिर गरे ।
२०५२ सालमा तात्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेको ४० सूत्रीय मागहरू यस्ता थिए।
No Comments on सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ , ॐ लेखि सक्दो धेरै से’यर गरौं |
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !
No Comments on अनन्तले भने– युवाहरु सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिन तयार छन्, दुवै अध्यक्षले निर्णय गरुन्
१५ मंसिर, रोल्पा । ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन (अनन्त)ले युवाहरु सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षले सहमतिमा यो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
रोल्पा नगरपालिका–३ लाँकुरीमा ३३/११ केभी सबस्टेशनको उदघाटन कार्यक्रमलाई सोमबार बिहान सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘दुवै अध्यक्षले प्रक्रियागत रुपमा निर्णय गर्नुस्, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्छौं भन्नुस्, हामी युवाहरु प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै चलाउन तयार छौं । र उहाँहरुलाई अभिभावकको रुपमा सम्मानित स्थान दिएर राख्छौं ।’
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीको नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको सन्दर्भमा नेता पुनले गृहजिल्ला रोल्पाबाट यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेता पुनले नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा आवेग र उत्तेजनामा घोषणा गर्ने विषय नभएको बताए । ‘यो विवेकले, प्रक्रियासम्मत ढंगले पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो,’ उनले भने ।
हाल नेकपाभित्रको पछिल्लो बहसले सिंगो देशको राजनीति नै प्रभावित भएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसबाट पार्टी एकता कमजोर नहुने दाबी गरे । यसले एकतालाई झन् बलियो बनाउने उनको विश्वास छ ।
नेता पुनले भने, ‘नेताहरुको बीचमा कहिले उच्च प्रवाह हुन्छ, कहिले न्यून प्रवाह हुन्छ । अहिले अलि उच्च प्रवाहजस्तो देखिएको छ, छलफल, संघर्ष, एकता रुपान्तरण भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा प्रक्रिया हो ।’
No Comments on चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा दुई घण्टा बिताउनुको अर्थ
१४ मंसिर काठमाडौं । एक दिने ‘वर्किङ भ्रमण’ का लागि नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङहेले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा झण्डै दुई घण्टा बिताए । नेपाली सेनाबाट ‘गार्ड अफ अर्नर’ लिएर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग औपचारिक वार्ता गर्दासम्म उनले जंगी अड्डामा लामै समय बिताए ।
यसबाहेक उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छोटो भेट गरे । र, आइतबार नै भ्रमण सकेर फर्किए ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाली पक्षसँगको भेटवार्तामा उठेका विषयवस्तुको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको पृष्ठभूमितिर जाउँ ।
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पश्चिमा मुलुकहरुसँग सैन्य सहायता लिने नीति अगाडि बढाएका थिए । उनको आग्रहप्रति विशेष गरी अमेरिका र वेलायत निकै सकारात्मक थिए ।
सन् १९६४ मा अमेरिकासँग एक सम्झौता भयो र केही सैन्य सामाग्री आयो । त्यसपछि वेलायतले पनि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न थाल्यो । त्यस अगाडी नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने मुलुक भारत मात्र थियो ।
त्यसपछि लामो समय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरे । नेपालको रक्षा क्षेत्रमा विशेषत भारत, अमेरिका र वेलायत प्रमूख साझेदारको रुपमा रहे ।
यस्तो सहयोगमा लामो समय भारतको प्रभूत्व रह्यो । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि नेपालले हतियार खरिद गर्‍यो । तर, भारतलाई जानकारी गराएर ।
अर्काे छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सहकार्यको स्कोप भने एकदमै सीमित रह्यो । तर, पछिल्लो समय चीनसंग नेपालको सैन्य सहकार्य बढेको छ ।
आवरणमा अन्य राजनीतिक र रणनीतिक सन्देश बोकेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ दुई देशबीच बाँक्लिदो सैन्य सहकार्यको निरन्तरता पनि हो ।
चिनियाँ सैनिक सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा नेपाल र चीनबीच धेरैपछि अर्थात् सन् १९८८ मात्र पहिलो सैन्य सहकार्य सम्बन्धी एक समझदारी भएको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि सैन्य सहकार्य भने प्रगाड रुपमा अगाडि बढेन । १९८९ मा नेपालले चीनबाट केही सैन्य सामाग्रीहरु लिँदा भारतले आपत्ती जनाएर नाकाबन्दी नै गरेको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि भारत, वेलायत र अमेरिकाले आफूले दिएको हतियार नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन दुरुपयोग हुने भन्दै नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग रद्द गरे ।
त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगका लागि चीनतर्फ हात फैलायो । चीनका लागि सहयोग विस्तार गर्ने त्यो एक अवसर थियो ।
नेपालमा सुरक्षा लगायत चिनियाँ चासोको ग्यारेन्टी गर्ने राजसंस्थाको आग्रहलाई चीनले इन्कार गरेन र सहयोग गर्‍यो । चीनले १९५० देखि नै नेपालको राजसंस्थालाई भरपर्दाे संस्थाको रुपमा लिएको थियो ।
त्यसैको निरन्तरता स्वरुप ७ कात्तिक २०६२ मा चीनले ठूलो राशीको सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता नेपालमा चिनियाँ सैन्य सहयोग बढेको बढ्यै छ । त्यसयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बदलाव आएको छ । भलै, राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।
आफूले भरपर्दाे मित्रका रुपमा लिँदै आएको राजसंस्था नरहेपछि चीन नेपालमा अर्काे संस्थाको खोजीमा थियो, जसले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । त्यसपछि चीनको नेपाल नीतिमा व्यापक धेरै परिवर्तन आउन थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि ठूला-साना सबै राजनीतिक दलसँग सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध बनाएर जाने नीति चीनले लिएको देखिन्छ । किनकि कुनै पनि दल कुनै पनिबेला सरकारमा जान सक्छ ।
नेपाल गणतन्त्र भएसँगै काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थी गतिविधि खुल्ला रुपमा देखिन थाल्यो, जसले चिनियाँ चासो झनै बढ्यो । सन् २००८-२०१० बीचमा काठमाडौंमा यस्ता गतिविधि निकै नै बढे ।
यस्ता घट्नाक्रमसँगै आफू विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न चीनले नेपालका प्रमुख दुई सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र शशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने नीति लियो ।
लगातार सत्ता र सरकार परिवर्तनले गर्दा एउटा पार्टी र सरकारमा भर पर्न कठिन हुने भएकाले चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोका लागि स्थायी शक्ति सेनासँग दीर्घकालीन सहकार्यको नीति अगाडि बढायो ।
२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि चीनले २.६ मिलियन डलर बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले चीनसँग सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयोग, त्यसको १२ वर्षपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई स्वागत गर्न उनै थापा गृहमन्त्रीको हैसियतमा आइतबार विमानस्थलमा पुगे ।
त्यसपछिका वर्षहरुमा चिनियाँ अधिकारीहरु बाक्लो रुपमा नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सैनिक अधिकृतहरुले एक अर्काको मुलुक भ्रमण गरिरहेका छन् ।
सन् २००८, २००९, २०११ र २०१३ मा चिनका उच्च सैनिक अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली सेनालाई सहयोगको घोषणा गरे । नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको हिसाबले २०१७ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । सो बर्ष नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच पहिलो सैन्य अभ्यास भयो ।
लामो समयदेखि भारतसँग भईरहेको सैन्य अभ्यास चीनसँग पनि शुरु भयो । त्यही वर्ष चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न र शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सैनिकका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।
विशेषतः शान्ति मिसनका लागि चाहिने सामाग्रीमा अन्य मुलुकको सहयोग अपर्याप्त भएपछि सरकारले चीनबाट सहयोग ल्याउन थाल्यो ।
सन् २०१७ दुई देशको सैन्य सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण रह्यो किनभने त्यो वर्षबाट नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको शुरुवात भयो । त्यसपछि २०१८ मा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेले चीन भ्रमण गरेर रक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसबेला सैन्य तालिममा सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, औषधी र अन्य उपकरण र शान्ति सेनामा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई दिने सैन्य सहयोगमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको थियो ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसको एक वर्षपछि २०१९ अक्टोबरमा फेरी चीन भ्रमण गरे । त्यसपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरुले पनि चिन भ्रमण गरिरहेका छन् । नेपाल-चीन सैन्य सहकार्य बढीरहेको समयमा नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बिभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
उक्त भेटवार्तापछि नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो भेटवार्ताका क्रममा आपसी हित र द्वीपक्षीय सैनिक सहकार्यको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रभावित भएका तालिम तथा शिक्षार्थी आदान-प्रदानका कार्यहरु सुचारु गर्ने र विगतमा सहमति भएका सैन्य सहायता प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले विगतमा गरेका सहयोगका प्रतिवद्धता शुचारु गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
चीनले नेपाली सेनालाई आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने एक दीर्घकालीन र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा हेरेको यसले देखाएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि उसले सरकारसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको छ ।
जो सरकारमा आयो उसैसँग मिलेर काम गर्ने चिनियाँ नीति हो । तर झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि अस्थिर देखिँदा चीनले सेनासँगको सहकार्यलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा चीनले हुम्ला जिल्लामा नेपाली भुभाग मिचेर भवनहरु बनाएका खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली सेनाले केही समय अगाडि सर्वे र सीमा निरीक्षणसम्बन्धी एक निर्देशनालय निर्माण गरेको छ ।
त्यसैले, सीमाको विषयमा समेत नेपाली सेनासँग चीनले नजिकबाट काम गर्न चाहिरहेको छ । यसरी हेर्दा सीमादेखि आफ्नो कोर सुरक्षा चासोको विषयमा नेपाली सेनासँग नजिकबाट काम गर्ने चिनियाँ नीतिको निरन्तरताका रुपमा नै यो भ्रमण भएको देखिन्छ ।
२ बर्षपछि अनिता बोल्नसक्ने भएपछि बिनोदको आँखा आँसुले भरिए (भिडियो सहित)
No Comments on २ बर्षपछि अनिता बोल्नसक्ने भएपछि बिनोदको आँखा आँसुले भरिए (भिडियो सहित)
सबैलाई उदाहरणीय जोडी बनेर चिनाएका अनिता खड्का र बिनोद खड्कालाइ भेट्न अस्पताल पुगेकी नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी भाबुक हुदै फर्किएकी छिन।
आफ्नो तर्फबाट केहि आर्थिक सहयोग बोकेर अस्पताल सम्म पुगेकी अन्जली अधिकारी अनिताको आवाजमा जव गलबन्दी गीत सुनिन तव आँखाभरि आँसु पार्दै निशब्द भईन ।
अमेरिकामा बस्ने समाजसेवी माया अधिकारीको जन्म दिनको अवसरमा अन्जली अधिकारीलाइ सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै १ लाख ५० हजार पठाउनु भएको थियो।
सोहि रकम हस्तान्तरण गर्न पुगेकि अन्जली जव पहिलोपटक लामो समय देखि अस्पतालमा थला परेकी अनिता बोल्न थालेपछि अन्जलीले आँखाभरी आँसु पारिन।
कलाकारिताबाट अन्जली अधिकारी सामाजिक काम तर्फ पनि लाग्दै आएकी छिन। तपाई सहयोग गर्नको लागि लालीगुराँस डटकमलाइ सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ,जसको लागि कमल सरगम (9851013209) हेर्नुस यो बिशेष कुराकानी: